How to Install Google apps « XMS-MMF
June 14, 2015XiaomiGapps, Google
ကိုယ့် android versionနဲ့ကိုက်တဲ့ google appsတွေမထည့်ရင် ပြဿနာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဖုန်း android versionနဲ့ကိုက်တာ ထည့်ရပါတယ်။
ကိုယ့် android version ကို about phoneထဲမှာ သွားစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
တကယ်လို့ android version 4.2.2ဆိုရင်တော့ xiaomiကထုတ်တဲ့ gapps installerရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်။ ဒီမှာ Download ပါ။ playstoreကို အဓိကထားထည့်ပြီး ကျန်တာကိုတော့ playstoreကနေဆွဲပါ။ playstoreကို ထည့်ရင် လိုတဲ့ ၃ခုပါထည့်ခိုင်းလိမ့်ပါမယ်။ အားလုံးကို ထည့်ပါ။ တခုပြီးလို့ OK နဲ့Launchပေါ်လာရင် Okပဲနှိပ်ပြီး အကုန်ပြီးအောင်ထည့်လိုက်ပါ။
တကယ်လို့ထည့်ပြီးတာတောင် play storeထဲဝင်လို့မရသေးရင် Recoveryထဲဝင်ပြီး Wide Cacheလုပ်ပေးပါ။
တကယ်လို့ ကိုယ့်ဖုန်းက android version 4.4သာဆိုရင်တော့ gapps zipထဲက apk တွေထည့်တာပိုကောင်းပါတယ်။
အောက်ကgapps zipကိုဖြည်ပြီး private-app folderထဲက apkတွေကိုထည့်ပါ။
မထည့်ခင်တော့ ကိုယ်အရင်ကထည့်ထားတဲ့ Googleနဲ့ play storeနဲ့ စတာတွေကို အရင်ဖျက်လိုက်ပါ။ ဘယ်မှာ ဖျက်ရမလဲဆိုရင် Settings > Installed Appsထဲရှာဖျက်ပါ။
အမှန်က gapps zipက recoveryကနေထည့်လို့ရတဲ့ flashable zipပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး dev romတွေမှာ ota updateမရတော့လို့ တခုချင်းဖြည့်ထည့်ခိုင်းရတာပါ။
4.4.xအတွက် ဒီမှာ Downloadပါ။
Credit to Ko Kyat Ka Lay, Ko Heureux Nyan, Ko Ko Mg (ကိုတောင်ပေါ်သား), Ko Tin Htay Ag, and original creators
အောက်ကစာတွေကတော့ ဆရာတွေရဲ့ မူရင်း ရေးသားချက်တွေပါ။
china rom ဖြစ်တဲ့အတွက် google service တွေ မပါပါဘူး ဒါကြောင့် mi market>google installer ကိုဒေါင်းပီး အရင်ဆုံး playstore ကို install လုပ်ပါ… ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဓိကလိုတာကလည်း ဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်နေလို့ပါ ပီးတော့ အဲဒီ့ကနေ ဒေါင်းရင် update ပြန်ပြန်ပီး လုပ်ပေးနေရတာမို့ playstore ရပီဆိုမှ အဲဒီ့ကနေ ဒေါင်းပါ.. လောလောဆယ် ခုနက နေရာက ပြန်ဆက်မယ်…. page တခုတက်လာမယ်…အဲဒီ့ထဲမှာ google framework, acc sync နဲ့ အားလုံးပေါင်း4file မြင်ရမယ် အောက်ဆုံးမှာ ဖုန်းပုံလေးရှိတယ် အဲဒါလေးကို နှိပ်ပီး အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ… google playstore ကို homepage မှာ မြင်ရပီဆို အိုကေပါပီ….. အောက်ကလင့်မှလည်း ဒေါင်းပီး တင်နိုင်ပါတယ်ဗျ…
အောက်က ဖိုင်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ cwm recovery လိုပါတယ်.. အဲဒီ့ကနေပီး ဒီဖိုင်လေးကို install လုပ်ပါ… ပီးရင် reboot now လုပ်ပါ ပြန်တက်လာရင် playstore ကို home page မှာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်………
Gapps. 4.4.x >>> http://www.mediafire.com/…/pa4d2vpwcp6vi38/4.4.X-GAPPS.zip
All Gapps for MIUI
( 1 ) Gapps for 4.2 +
GoogleAccountManager 4.2 + http://pc.cd/fQs7
GoogleServiceFramework 4.2 + http:// pc.cd/z8s7
Gapps 4.2 + http://pc.cd/34s7
(2)Gapps for 4.3 +
GoogleAccountManager 4.3 + http://pc.cd/x4s7
GoogleServiceFramework 4.3 + http:// pc.cd/j4s7
Gapps 4.3 + http://pc.cd/xQs7
(3)Gapps for 4.4 +
GoogleAccountManager 4.4 + http://pc.cd/C8s7
GoogleServiceFramework 4.4 + http:// pc.cd/DYs7
Gapps 4.4 + http://pc.cd/yYs7
(4)Gapps for 5.0 +
GoogleAccountManager 5.0 + http://pc.cd/K4s7
GoogleServiceFramework 5.0 + http://pc.cd/18s7
Gapps 5.0 + http://pc.cd/SYs7
(5) Gapps for 5.1.+
GoogleAccountManager 5.1 + http://pc.cd/gQs7
GoogleServiceFramework 5.1+ http:// pc.cd/y8s7
Gapps 5.1+ http://pc.cd/04s7
TPT11.5.2015 2:43 pm
Credit to ကိုတောငျပျေါသား==============================================
[Unicode]Xiaomi phone တှမှော china stable rom တငျတဲ့အခါပဲ ဖွဈဖွဈ dev rom တငျတဲ့အခါပဲဖွဈဖွဈ ကနြျောတို့ မလုပျမဖွဈထပျလုပျရတာ gapp တှထေညျ့ရတာပဲ။ gapp ထညျ့နညျးကလညျး မြားပါတယျ။၁.. custom recovery ကနေ gapp zip file ကို flash ပေးတာ။၂.. Google installer လို third party သုံးပွီးထညျ့တာ။၃.. framework ကို install လုပျတာ။နံပါတျ ၁ နညျးက custom recovery အရငျတငျထားဖို့လိုပါတယျ။ gapp zip file ထဲမှာ လိုအပျတဲ့ framework နဲ့ အသုံးမြားမယျ့ app တှေ ထညျ့ပေးထားတယျ။ Android version တှကေ 4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.x ဆိုပွီးကှဲလို့ သကျဆိုငျရာ gapp ကိုထညျ့ဖို့လိုတယျ။ flashable gapp file ကလညျး app မြိုးစုံပေါငျးထညျ့ထားလို့ file size မြားတတျတယျ။ တဈခါ ဆှဲထားပွီးရငျ ပွနျသုံးလို့ရပမေယျ့ update မဖွဈလို့ update ထပျဆှဲရပွနျရော။ gapp ထဲမှာပါတဲ့ app တဈခြို့ ကလညျး ကိုယျမသုံးဘူး။ ဆိုတော့.. ဒီနညျးကို ကနြျောသိပျမကွိုကျပါ။နံပါတျ ၂ နညျးက Android နဲ့မရငျးနှီးသူတှအေတှကျ ကောငျးပါတယျ။ Android version နဲ့ကိုကျညီတဲ့ framework ကို software ကပဲရှေးပေးလို့ 4.2.2 တှေ 4.4.x တှေ နားလညျစရာမလိုဘူး။နံပါတျ ၃ နညျးက service လုပျသူတှအေတှကျကောငျးပါတယျ။ ပုံထဲကလို Android versions အလိုကျ framework တှဆေောငျထားဖို့လိုမယျ။ အသုံးမြားတဲ့ play store တို့ gmail တို့လညျးဆောငျထားရမယျ။ သုံးနညျးကတော့..Android version က 4.2.2 ဆိုရငျ 4.2.2 ရဲ့ Google Services Framework နဲ့ Google Account Manager ကိုအရငျထညျ့လိုကျရငျပဲ google account လုပျလို့ရပါပွီ။ ပွီးရငျ မဖွဈမနေ ထညျ့ရမှာက Google Play Services နဲ့ Google Play Store တို့ပါပဲ။ ကနျြတာတှကေိုတော့ အဆငျပွသေလိုထညျ့လို့ရပါတယျ။နံပါတျ ၃ ကတော့ ကနြျောအကွိုကျဆုံးနညျးပါပဲ။မှားရင် ပင်ြပေးကပြာ။
[Zawgyi]Xiaomi phone တွေမှာ china stable rom တင်တဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် dev rom တင်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ မလုပ်မဖြစ်ထပ်လုပ်ရတာ gapp တွေထည့်ရတာပဲ။ gapp ထည့်နည်းကလည်း များပါတယ်။၁.. custom recovery ကနေ gapp zip file ကို flash ပေးတာ။၂.. Google installer လို third party သုံးပြီးထည့်တာ။၃.. framework ကို install လုပ်တာ။
နံပါတ် ၁ နည်းက custom recovery အရင်တင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ gapp zip file ထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ framework နဲ့ အသုံးများမယ့် app တွေ ထည့်ပေးထားတယ်။ Android version တွေက 4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.x ဆိုပြီးကွဲလို့ သက်ဆိုင်ရာ gapp ကိုထည့်ဖို့လိုတယ်။ flashable gapp file ကလည်း app မျိုးစုံပေါင်းထည့်ထားလို့ file size များတတ်တယ်။ တစ်ခါ ဆွဲထားပြီးရင် ပြန်သုံးလို့ရပေမယ့် update မဖြစ်လို့ update ထပ်ဆွဲရပြန်ရော။ gapp ထဲမှာပါတဲ့ app တစ်ချို့ ကလည်း ကိုယ်မသုံးဘူး။ ဆိုတော့.. ဒီနည်းကို ကျနော်သိပ်မကြိုက်ပါ။
နံပါတ် ၂ နည်းက Android နဲ့မရင်းနှီးသူတွေအတွက် ကောင်းပါတယ်။ Android version နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ framework ကို software ကပဲရွေးပေးလို့ 4.2.2 တွေ 4.4.x တွေ နားလည်စရာမလိုဘူး။
နံပါတ် ၃ နည်းက service လုပ်သူတွေအတွက်ကောင်းပါတယ်။ ပုံထဲကလို Android versions အလိုက် framework တွေဆောင်ထားဖို့လိုမယ်။ အသုံးများတဲ့ play store တို့ gmail တို့လည်းဆောင်ထားရမယ်။ သုံးနည်းကတော့..Android version က 4.2.2 ဆိုရင် 4.2.2 ရဲ့ Google Services Framework နဲ့ Google Account Manager ကိုအရင်ထည့်လိုက်ရင်ပဲ google account လုပ်လို့ရပါပြီ။ ပြီးရင် မဖြစ်မနေ ထည့်ရမှာက Google Play Services နဲ့ Google Play Store တို့ပါပဲ။ ကျန်တာတွေကိုတော့ အဆင်ပြေသလိုထည့်လို့ရပါတယ်။နံပါတ် ၃ ကတော့ root မလို.. custom recovery မလို.. အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ဒေါင်းစရာမလိုလို့ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးနည်းပါပဲ။မှားတာ လိုတာရှိရင်ပြင်ပေးကြပါ။
Credit to Heureux Nyan